नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले कारोबार सुरु गरेको छ । विगत २५ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय रहेको नबिल बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा यसको स्थापना भएको हो । बैंकले वैशाख १३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन अनुमति पाएको हो ।
लगानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बढीभन्दा बढी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंक स्थापना गरिएको हो । ‘यो मर्चेन्ट बैंकिङ मात्र नभएर इन्भेस्टमेन्ट बैकिङ पनि हो । पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सेवाहरू कसरी र कुन तहसम्म नेपालमा ल्याउन सकिन्छ त्यसको खोजी गरी सर्वसाधारणलाई प्रभावकारी सेवा दिने उद्देश्यले यसको स्थपाना भएको हो ’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले भने ।
बैंकले काठमाडौंका चाबहिलमा कार्यालय स्थापना गरेको छ । अहिले नबिल बैंककै भवन कमलादीबाट सेवा प्रदान गरिरहेको नबिल इन्भेस्टमेन्टले छिट्टै सम्पूर्ण सेवाहरू चाबहिल कार्यालयबाट प्रदान गर्नेछ । बैंकले हाल निष्कासन प्रबन्धकको काम गर्दै आइरहेको छ । यसअन्तर्गत प्राथमिक, हकप्रद,सेयर निष्कासन व्यवस्था पर्दछन् । बैंकको हाल चुक्ला पुँजी रू. ७ करोड र जारी पुँजी रू. १० करोड रहेको छ । ७० प्रतिशत प्रवद्र्धक लगानी रहने बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलई विक्री गरिनेछ ।